New Xiaomi Mi 10 Edition nke ndị ntorobịa na omimi: ọ ga - abụrịrị onye kacha ere ahịa? [Nyocha] | Gam akporosis
New Xiaomi Mi 10 Edition nke ndị ntorobịa na omimi: ọ ga - abụrịrị onye kacha ere ahịa? [Nyocha]
Kasị nso na Xiaomi Mi 10 ezinụlọ emesia emeputara, ma gosiputa dika Akwukwo ndi ntorobịa Mi 10, dị ka anyị kwurula n'ụzọ dị mkpirikpi n'isiokwu a.
Ọ bụ ezie na o nwere ụdị nkọwapụta na atụmatụ dị iche iche karịa nke ụmụnne ya ndị toro eto, bụ ndị Mi 10 na Mi 10 Pro, o nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye; n'ezie, n'ime etiti, ọ dị ka otu n'ime ndị kachasị mma taa ekele maka nhazi ahụ ọ na-eburu n'okpuru mkpuchi ya na àgwà ya ndị ọzọ anyị ga-abawanye n'okpuru. Site na mgbasawanye na àgwà ya, Anyị ga-ahụ ma ọ nwere ihe ọ ga-ewe ịbụ nke ọhụrụ ọganihu emeputa.
1 Ihe niile banyere ihe ohuru ndi ohuru nke Mi 10 sitere na Xiaomi: o nwere usoro iji nwee ihe ịga nke oma na onodu ahia?
1.1 Egwuru egwu na-apụta na ekwentị a
1.2 Usoro igwefoto dị mma dị mkpa iji pụta
1.3 MIUI 12 na eriri ihu
1.4 Ezigbo ego maka ego enweghị ike ịla n'iyi
Ihe niile banyere ihe ohuru ndi ohuru nke Mi 10 sitere na Xiaomi: o nwere usoro iji nwee ihe ịga nke oma na onodu ahia?
Xiaomi Mi 10 Agba ndị ntorobịa
Anyị ga-amalite ikwu maka imepụta ya, nke na-agbanwe ọtụtụ, ma e jiri ya tụnyere ụdị ya dị iche iche. N'ebe a, anyị tufuola ojiji nke ihuenyo a na-atụgharị n'akụkụ ya. Xiaomi choro ka ichoputa uzo ozo bara uru, si otú na-esite na-ahụkarị, ma obere bezels ugbua mara site na nke a nso nke mobiles; Anyị na-ele nke a anya dị ka ihe dị mma, ebe ọ bụ na mpempe akwụkwọ mbadamba na ha niile nwere ntụsara ahụ karịa mpempe akwụkwọ na mobiles, na mgbakwunye na izere ntụgharị uche na-adịghị mma nke akụkụ ha. Ọzọkwa, iji nye obere ọkwa n'ọdịdị nke mmiri mmiri, a na-ewepu oghere dị na ihuenyo ahụ, nke na-adịghị amasị ọtụtụ ma mee ka igwefoto selfie dị na Mi 10 na Mi 10 Pro ma dị na akuku aka ekpe elu.
Banyere azụ, enwekwara nnukwu ọdịiche dị n'etiti ekwentị ọhụrụ a na abụọ ndị ọzọ ekwurula, bụ ndị malitere, site n'ụzọ, n'etiti ọnwa Febụwarị. Usoro ihe osise na - aghọ akụkụ anọ na akụkụ na - enweghị usoro, mana onye na - agụ akara mkpịsị aka apụtaghị ebe ọ bụla; Nke a, n'aka nke ọzọ, na-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ n'okpuru ihuenyo ahụ, nke bụ teknụzụ Super AMOLED ma jiri sentimita 6.57. N'ime ndị ọzọ, panel ahụ enweghị ihe ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma ịkọwa na ihe owuwu nke ngwaọrụ a kachasị mma, si otú a na-enye mmetụta adịchaghị metu.
Ngosipụta ahụ na-emepụta mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na nchapụta kachasị nke nits 800, nke karịrị akarị iji mepụta agba doro anya na nke doro anya na ụbọchị anwụ na-acha ọkụ ma dị elu karịa nke ọtụtụ ọdụm na-emepụta taa; ihe ozo kuru onye meputara. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, nke a anaghị enye teknụzụ HDR10 +.
Egwuru egwu na-apụta na ekwentị a
Igwe mkpanaka nke edobere n'okpuru mkpuchi nke Xiaomi Mi 10 Youth Edition bụ nke kachasị ike na etiti Qualcomm na otu n'ime ole na ole na-enye 5G. Anyị na-ekwu n'ụzọ doro anya nke amaara ama Ihe nhazi Snapdragon 765G, 8nm octa-core chio nke na-egosipụta nchịkọta ndị na-esonụ: 1x Kryo 475 Prime (Cortex-A76) na 2.4 GHz + 1x Kryo 475 Gold (Cortex-A76) na 2.2 GHz + 6x Kryo 475 Silver (Cortex -A55) na 1.8 GHz. Chipset a nwere Adreno 620 GPU na, na nke a, yana RAM nke 6/8 GB na oghere nchekwa dị n'ime 64/128/256 GB nke ikike. A na-enyekwa ya batrị 4,160 mAh nke kwekọrọ na chaja ngwa ngwa 22.5-watt., nke dị mma maka oke a.
Ekele maka usoro nhazi ahụ, el Ịgba Cha Cha Ọ ga-abụ akụkụ nke smartphone ga-ekpuchi n'enweghị nhụjuanya ọ bụla. Mgbawa ahụ emeela nke ọma n'ụzọ dị mma dị ka AnTuTu na nsonaazụ dị egwu nke na-adịghị eweta ọdịiche dị njọ na ndị ọrụ arụmọrụ ndị ọzọ dị elu. Performancerụ ọrụ nke etiti a ga-enwu dị ka otu n'ime ihe kachasị mma, na-enweghị mgbagha.
Usoro igwefoto dị mma dị mkpa iji pụta
Igwefoto Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Ga n'ihu na isiokwu igwefoto, anyị na-ahụ na ihe mmetụta 48 MP na oghere f / 1.79 bụ nke na-eduzi ngalaba foto a. A na-ejikọ oghere a na oghere 8 MP n'obosara na oghere f / 2.2 na oghere anya 120 Celsius, igwefoto ToF, yana ihe mkpuchi MPI 8 nke na-arụ ọrụ dị ka oghere telephoto periscope nke na-enye ohere nke mbugharị. Ngwakọ ruo 50X ( 5X ngwa anya na 10X dijitalụ), ihe na-ahụbeghị tupu na ekwentị nke a nso. Ndị na-eto eto Mi 10 nwekwara ike ịme foto macro na atụmatụ OIS stabilization maka vidiyo. Usoro igwefoto ya bụ otu n'ime isi ihe kacha sie ike.
MIUI 12 na eriri ihu
Ihe a na-atụghị anya ya na ekwentị a bụ MIUI 12. Nke ahụ bụ eziokwu, Xiaomi ọhụrụ customization oyi akwa debuts na Mi 10 Youth Edition; ọ bụghị Mi 10 na Mi 10 Pro ka nwere ya. Nke a na-egosipụta ọhụụ na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ nke a na-achọpụtabeghị, mana nke ekpughere na mbido ka ọ maa mma ma hazie karịa nsụgharị ndị gara aga.
Ezigbo ego maka ego enweghị ike ịla n'iyi
Nke ahụ bụ otú ọ dị. Ihe ụlọ ọrụ China ji mara na-enye ekwentị mkpanaaka na oke ogo dị na ngwaahịa ọ bụla, yana nke a bụ ihe na - adịghị echekwa ekwentị ọhụrụ a.
Site na ọnụahịa nke na-amalite site na 270 euro ruo 365 euro iji gbanwee (ọ dabere na ụdị nke RAM na ROM a họọrọ), ezigara ya ka ọ bụrụ otu n'ime etiti kachasị mma nke afọ a. N'oge ahụ, ọ dịka otu n'ime ekwentị SD765G dị ọnụ ala karịa oge a.
Anyị anaghị atụ anya obere ihe n'aka Mi 10 Ntorobịa, n'ezie. Anyị na-ebu amụma ihe ịga nke ọma na ahịa, n'agbanyeghị eziokwu na na a akụkọ ihe mere eme larịị ìhè variants mgbe agbasaghị ịpụta ukwuu na ahịa.
Otú ọ dị, ọ ka ga-ahụ otú nnabata nke ekwentị mkpanaaka a, nke nwere ike isi metụta nke mbipụta nke coronavirus na nsogbu akụ na ụba ụwa nke a na-enwe ugbu a; Ndị mmadụ n'oge a na-ebute ụzọ n'inweta ngwaahịa ndị bụ isi na ndị na-enweghị isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Xiaomi Mi 10 Edition nke ndị ntorobịa na omimi: ọ ga - abụrịrị onye kacha ere ahịa? [Nyocha]
Soro ugbu a na-enye gị ohere ịfefe faịlụ na mpaghara ma jiri iwu kachasị amasị na pịa aka nri
MIUI 12: Mara ozi ya niile na ekwentị ga-enweta ya